မုံရွာမြို့နယ် ကျောက္ကာထန်း ဇလုတ် အပန်းဖြေစခန်း ချောင်းအတွင်း ရေနစ်ခဲ့သော လူငယ်နှစ်ဦး အလေ?? - Yangon Media Group
မုံရွာ၊ ဇူလိုင် ၂၈
မုံရွာမြို့နယ် ကျောက္ကာရွာရှိ ထန်းဇလုတ် ချောင်း အပန်းဖြေစခန်းတွင် ဇူလိုင် ၂၇ (ဝါဆိုလပြည့်နေ့) က ချောင်းအတွင်း ရေဆင်းချိုးရင်း ရေနစ်ပျောက်ဆုံးခဲ့သော လူငယ်နှစ်ဦး၏အလောင်းကို ဇူလိုင် ၂၈ ရက်က ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးမီး သတ်တပ်ဖွဲ့မှ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းလူငယ်နှစ်ဦးပျောက်ဆုံး မှုကို လပြည့်နေ့ညနေပိုင်းက ဆွေ မျိုးများနှင့် သူငယ်ချင်းများမှ တစ်ဆင့်သိရပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ် ရေးမီးသတ်တပ်ဖွဲ့များမှ ညတွင်း ချင်းရှာဖွေခဲ့သည်။ သို့သော် မ တွေ့သဖြင့် ဇူလိုင် ၂၈ ရက် နံနက် ပိုင်း၌ ထပ်မံရှာဖွေရာ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သော မန္တလေးမြို့ စက်မှု (၁) နေ အသက် (၁၂) အရွယ် မောင်လင်းလင်း ထက်၏အလောင်းကို ကြိုးတံတား အနီးတွင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် မုံရွာမြို့ ကန်သာဦးရပ် ကွက်နေ အသက် (၂ဝ) အရွယ် ထွန်းလင်းအောင်အလောင်းကို ရေ တံခွန်အောက်ဘက်တွင် တွေ့ခဲ့ ရခြင်းဖြစ်သည်။
”ချိတ်တွေနဲ့ပစ်ပြီးရှာတာ မ တွေ့ဘူး။ မုံရွာကလူငယ်က ခြေ ချော်ပြီး ရေစီးနဲ့ပါသွားတဲ့ပုံစံပါ။ ဒူးတွေပွန်းပဲ့နေတာတွေ့ရတယ်။ သူ့ကို ကျောက်ကြိုကျောက်ကြား မှာ ရှာတွေ့တာ။ အလောင်းတွေကို ဆေးရုံပို့စစ်သွားမှာပါ”ဟု ရှာ ဖွေကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်နေ သော မုံရွာမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဦးစီးမှူး ဦးညီညီဇော်က ပြောသည်။
ပျောက်ဆုံးကလေးငယ်များ ကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၅ဝ ခန့်ဖြင့် လှေနှင့်လည်းကောင်း၊ ရေအောက်ကြည့်ကင်မရာဖြင့် လည်းကောင်း ရှာဖွေမှုများပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။ ကျောက္ကာထန်းဇလုတ်ချောင်း ရေတံခွန်သည် မိုးရာသီတွင် ရေစီးသန်ပြီး ကျောက်ကြိုကျောက် ကြားအန္တရာယ်ရှိ၍ ရေဆင်းမကူး ရန်သတိပေးစာများကို ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း၊ ဝါဆိုလပြည့်နေ့က ကျောက္ကာရွှေဂူနီနှင့် ထန်းဇလုတ် ရေတံခွန်သို့ ဘုရားဖူးအပန်းဖြေ လာသူ သိန်းချီရှိကြောင်း ဈေးသည်များကဆိုသည်။
ဒိန်းမတ်တွင် ကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ် 'ဥရောပဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်ဖိုရမ်' ဥရောပရောက် မြန်မာလူငယ် ၅ဝ ကျေ??
မြဝတီနယ်စပ် သောင်ရင်းမြစ်ဖြတ် ဂိတ်များမှ တရားမဝင် ထိုင်းကုန်စည်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြ?
အေဂျင်စီ အသစ်နဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့ Girls Generation အဖွဲ့ဝင် ဆူယောင်း